Analamanga rugby : tsy nahatohitra ny Tam ny Stade | NewsMada
Analamanga rugby : tsy nahatohitra ny Tam ny Stade
Par Taratra sur 04/09/2017
Nitohy, tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena omaly alahady, ny andro fahefatra amin’ny fiadiana ny ho tompondaka, karakarain’Analamanga rugby. Nisy ny lalao natokana ho an’ny “Elite 2” ary teo koa ny an’ny “Elite 1”.
Ho an’ity farany, niondrika teo anatrehan’ny Tam Anosibe, tamin’ny isa mazava 20 no ho 12, ny Stade Olympique de l’Emyrne. Hita ho mbola mipetraka ny fahaiza-manao sy ny traikefan’ireo mpilalaon’Anosibe. Tetsy ankilany, niezaka nanohitra hatrany ry Menavalahana, saingy tsy navelan’ny Tam, ho lasa lavitra.
Teo amin’ny fihaonana ilany, resin’ny TFMA Ankasina, tamin’ny isa 15 no ho 3, ny XV Family. Natanjaka ary nahay nampiasa ny haben’ny vatan’ireo mpilalaony ry zareo Ankasina, ka anisan’ny tombony ho azy ireo izany. Ny TFA Anatihazo, nandresy ny Matadorea, tamin’ny isa 29 no ho 13.
Ho an’ny “Elite 2”, nomontsanin’ny XV FTV, tamin’ny isa mavesatra 20 no ho 0 ny FTA ary nisaraka tamin’ny isa tery, 23 no ho 21, kosa ny Hiza 17 sy ny ATI Ivandry. Hitohy, amin’ny faran’ny herinandro izao, indray ny fifanintsanana, ho an’Analamanga rugby.